साहित्य Archives - KTMreports.com
कवि दिवसको ‘सम्झिराख’नेपथ्यको भिडियोमा
काठमाडौं । चिरपरिचित कवि तुलसी ‘दिवस’ले धेरै वर्षअघि लेखेको कविताका लाइनहरु नेपथ्यको दशाैं अल्बममा गीतका रुपमा समेटिइसकेको छ । ‘मेरै जस्तो तिम्रो हृदयको गमलामा पनि सम्झनाको फूल फुलेकै होला सम्झिराख सम्झिराख, लामो सफरमा आँसु र हाँसो बाँड्नुपर्छ सम्झिराख’ अब भने श्रोतालाई नेपथ्यको रजत वर्षमा घोषित उपहार शृंखला अ...
धनगढीमा डोट्याली सुवासको एकल कविता वाचन
धनगढी । दुई महिनाअघि पोखरामा एकल कविता वाचन मार्फत पोखरेलीको मन जितेका डोट्याली कवि हेमन्त विवशले धनगढीका साहित्यप्रेमीलाई मन्त्रमुग्ध बनाए । रुबस होटलमा आयोजित एकल रचना वाचनमा उनले दुई दर्जन सृजना सुनाए । गीत, गजल र कवितामा भुइँ मान्छेका कथा उन्दै आएका कविले तिनै सीमान्तकृतहरुको आवाज बुलन्द गरे । भगवानको खोजी शी...
भनिन्छ, शिवरात्रिपश्चात् काठमाडौंमा जाडो कम हुन्छ र गर्मी बढ्न थाल्छ । कठ्याङ्गि्रएको शरीरमा अब केही समय सायद आराम महशुस हुन्छ, न्यानोपन ! शरीरलाई त आराम मिल्ला तर कामज्वरो छुटेझैं कम्पित मनलाई कसरी आराम होला र खै ! अफिस छुट्टी भए पनि बाँकी सारा कुरा यथावतै छन् । उकुसमुकुस, छट्पटी, बेचैनी उफ् ! घरमा बसिरहँदा झन् उद्...